समायोजनमा जाने प्रहरीलाई दोहोरो सुविधाको प्रस्ताव | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more समायोजनमा जाने प्रहरीलाई दोहोरो सुविधाको प्रस्ताव
चैत ९ गते, २०७५ - ०७:५१
काठमाडौं । सरकारले तयार पारेको प्रहरी समायोजन विधेयकमा प्रहरीले खाई पाई आएको तलबमा २ ग्रेड वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशमा समायोजन भइसकेका प्रहरीलाई हाजिर नगराए प्रमुखलाई नै कारबाही हुने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ – ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन यो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
चैत ९ गते, २०७५ - ०७:५१ मा प्रकाशित
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ असैनामा रहेको कुखुरा फार्ममा आगलागी हुँदा १० लाख बढीको...
स्पेनिस ला-लिग फुटबल : मेस्सीको ह्याट्रिकसहित चार गोलले बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा
एजेन्सी । लियोनल मेस्सीले स्पेनिस ला लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि बार्सिलोना पुनः शीर्ष स्थानमा...
क्याबेरा । मलेसियाको एमएच३७० विमान पाइलटले आत्महत्या गर्नका लागि झारेका थिए । आजको कारोबार दैनिकमा...
रोनाल्डोको १,००० औँ खेल स्मरणीय, युभेन्टसकाे जितमा गरे कीर्तिमानी गोल
एजेन्सी । पोर्चगिज फुटबलर क्रिष्टियानो रोनाल्डोले आफ्नो खेल जीवनको १,००० औं खेल खेलेका छन् । यही खेलमा...
काठमाडौं । नयाँ पेट्रोलपम्प सञ्चालनको स्वीकृति फागुन महिनाभित्रै दिइने तयारी छ । दस महिनाअघि आवदेन...
भैरहवा । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति नहुँदा उद्योगी समस्यामा...
काठमाडौं । आपराधिक घटनामा संलग्न र बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा परेका व्यक्तिलाई विदेश यात्रामा कडाइ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)...
नायक आयुष्मानको यो कस्तो चटक ? प्रियंकाको कपी गर्दा ट्रोलको सिकार बने (फोटोसहित)
कति छ आज डलरदेखि रियालसम्मको भाउ ?
प्रधानमन्त्री ओलीले गोकुल बाँस्कोटाकाे बचाउ गर्दै भने – पार्टीले छानबिन गर्नु पर्दैन
गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणबारे ओली र प्रचण्डबीच यस्तो चर्काचर्की